March 2015 - မြန်မာစာတန်ထိုး ရုပ်ရှင်များ
အရမ်းကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ Spy Angent နှစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ....
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဟာသအက်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းလာသမျှကို ဒီဇာတ်ကားနဲ့ အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။
IMDB Ratings: 6.4/10 အထိရရှိထားပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။
Reese Witherspoon ၊ Chris Pine ၊ Tom Hardy တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 247MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Sci-Fi | Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb မှာ Ratings: 6.5 ပါ..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တောင်းဆိုထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အကြိုက်တွေ့မယ်မျော်လင့်ပါတယ်...
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 210MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဖိုင်ဆိုဒ် 210MB လေးကို ၅ နာရီနီးပါးလောက် အချိန်ယူပြီး တင်ထားတာဗျာ အရင်က ၄နာရီဆို တင်ပြီးနေပြီး ခု ၆နာရီနီးမှ တင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့ဗျ လိုင်းကလဲ
ကဲ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးဗျာ
pCloud ကနေဖိုင်ဆိုဒ် 239MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီရဲ့ နာမည်ကျော် (The Last Supper) " နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ " ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားပုံကို အခြေခံပြီး တမန်တော်ယေရှုရဲ့ မျိုးဆက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပုံကို တင်ပြထားတာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းက စာရေးဆရာ Dan Brown ရဲ့ စာအုပ် The Da Vinci Code ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားကြီး Tom Hanks ပါဝင်ထားပြီး လျှို့ဝှက်သည်းဖို ကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သေချာပေါက်အကြိုက်တွေ့မယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက အသက်ဝင်လွန်းလို့ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်
ဤဇာတ်လမ်းကိုရေးသားသူ(Dan Brown) ကိုယ်တိုင်က စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း (Fiction) တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အတိအကျ ဝန်ခံထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ပြီးသွားလို့ ဘဝင်မကျတာများရှိရင် http://cbc-dc.com/2011/06/25/davinci-code/ မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 417MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
၂၀၀၆ ကတည်းက စတင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ဟာသဇာတ်လမ်းရဲ့ တတိယမြောက် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သလို နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားသစ်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁၉၃၈ တုန်းက ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အဖွဲ့ဟာ အဖိုးတန်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့ အီဂျစ်ဂူသင်္ချိုင်းတစ်ခုကို တူးဖော်ပါတယ်။ ဂူသင်္ချိုင်းထဲကိုကောင်လေးတစ်ယောက် ပြုတ်ကျရာကနေ သူ့ဖခင်နဲ့ အခြားရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေကို လမ်းကြောင်းရှာပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖာရိုဘုရင်ရဲ့ ကမ္ပည်းထိုးထားတဲ့ရွှေချပ်ပြားကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ရွှေကမ္ပည်းပြားကို နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် နယူးယောက်မြို့က သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ကြီးမှာ အခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလုပ်နေပြီး ဒေါက်တာမက်ပီး တက်ရောက်လာတာကို ပြတိုက်လုံခြုံရေးဖြစ်တဲ့ လာရီဒါလေကတွေ့ပါတယ်။ Night at the Museum အရင်ဇာတ်ကားတွေအတိုင်းပဲ ပြတိုက်က အရုပ်တွေ အသက်ဝင်ပြီး သူတို့အသက်ရှင်စဉ်ကနေခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းနေရင်း ပြတိုက်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ အီဂျစ်ဂူသင်္ချိုင်းထဲက ရွှေကမ္ပည်းပြားက နယူးယောက်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီပစ္စည်း တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာတာကို ဘယ်သူမှ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ကမ္ပည်းပြားကြောင့် အခမ်းအနား
က ပရမ်းပတာတွေဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်တွေကို တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အရာအားလုံးတည်ငြိမ်သွားပေမယ့် ကမ္ပည်းပြားကြောင့်လို့တော့မသိခဲ့ကြပါဘူး။
တစ်ရက်မှာ လာရီဟာ ပြသနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေရင်း ပထမဆုံး ကမ္ပည်းပြားတွေ့တုန်းကပါသွားတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူ့အဖေဓာတ်ပုံကို တွေ့ပြီး အဲဒီကောင်လေးဟာ ဆီ ဆဲဖရက်ဒရစ်ဆိုသူ ရွှေကမ္ပည်း ပြားခိုးယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ ပြတိုက် လုံခြုံရေးဟောင်းဆိုတာ သိရပါတယ်။
ဆီဆဲဟာ အလုပ်က အနားယူပြီးဖြစ်တာကြောင့် သူနေတဲ့နေရာအထိ လိုက်သွားပြီး ကမ္ပည်းပြားအကြောင်းကို မေးမြန်းရင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
လာရီတစ်ယောက် ရွှေကမ္ပည်း ပြားရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား။ မှော်ဝင် ကမ္ပည်းပြားကြောင့် ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ ဆိုတာ........။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို 7Day Daily မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 228 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, ဟာသ
Action ကား ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပါ မင်းသားကြီး Kevin Costner ရဲ့ Action | Drama | Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ.. အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 292MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သရဲကား ကြည့်ချင်သပါ့ဆိုသူများအတွက်ပါ :D ကြောက်တတ်ရင် မကြည့်နဲ့ပေါ့ :D pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 293MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သရဲကား, သဲထိတ်ရင်ဖို
ထူးထူးဆန်းဆန်း အမြင်ဆန်းကားလေးတွေ ကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါ အညွှန်းမရေးပေးတော့ဘူးနော် ဒီနေ့ အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ပါ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး pCloud ကနေဖိုင်ဆိုဒ် 250MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဦး
CIA အေးဂျင့်ဟောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရန်ကြွေးရှင်းတမ်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။
တချို့နေရာတွေမှာ ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေက ပြင်းထန်ပါတယ်။
Nicolas Cage ပရိတ်သတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး
Rating တွေနည်းနေတာကိုတော့ သတိပြုရမှာပါ။
(မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ ကသာသားလေး မှရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 238 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဦး
ရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် အထူးခြားဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ ဘာကြောင့်ထူးခြားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ဖူးသူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆိုတာ မပြောလိုပါ။ ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း မသိလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။ ထိုမှသာ ဒီကားဘာကြောင့် ဘယ်လို ကောင်းတယ်ဆိုတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သက်သေထူနိုင်မှာ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဦးနှောက်ကို စဉ်းစားစရာ အတွေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်စေခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်ပျော်သွား စေခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို အတိုချုံးပီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Fizzle Bomber ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက် Bomber တစ်ယောက်ကို Time Travelling လုပ်ပြီး လိုက်ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ စုံထောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပါပဲ။ ဒီလောက်သိရင် လုံလောက်ပါပြီ။
ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးသမျှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ ဒီ Predestination ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ သနားဖို့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘဝရဲ့ အဖြစ်မှန်ဟာ အလွန်ကို ထူးဆန်းပြီး အလွန်ကို သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကောင်ကိုယ်တိုင် သူ့ ဘဝရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိသွားရတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသူ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အလွန်အံ့သြပြီး အလွန်ဝမ်းနည်းမိသွားခဲ့ရပါတယ်။ လူ့လောကမှာ သူ့ ဘဝလောက် ဆိုးတဲ့ဘဝ ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ သူ့ဘဝလောက် အထီးကျန်တဲ့ ဘဝရှိမှာလည်း မဟုတ်တော့ပါ။ သူ့ ဘဝလောက်လည်း မည့်သည့်ဘဝမှ ထူးဆန်းမည်မဟုတ်ပါ။ သေချာပါတယ်။ ဒီကားဟာ ကြည့်ပြီးတဲ့ လူတိုင်းကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ လိုက်နှောင့်ယှက်နေမယ်ဆိုတာ.....။
ဒီ Predestination ဇာတ်ကားဟာ Sci-fi ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမဲ့ များစွာသော sci-fi ဇာတ်ကားများလို အနာဂတ်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ လွန်ခဲ့သော အတိတ်များတွင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ စာရေးဆရာကြီး Robert A. Heinlein ရေးသားခဲ့တဲ့ '"—All You Zombies—"' ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတို တစ်ပုဒ်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ စာရေးဆရာကြီး Robert A. Heinlein သည် ဤကဲ့သို့ အလွန်တရာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲဆန်းကျယ်လှတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို July 11, 1958 တစ်ရက်ထည်းမှာတင်ပဲ အပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ နောက်ထိုဇာတ်လမ်းတိုကို Playboy Magazine ကိုပို့ ခဲ့ရာ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ Fantasy and Science Fiction magazine က 1959 ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Movies-we watch,we feel.'s Facebook Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 247 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, အက်ရှင်
နံပါတ်လေး နောက်ဆုံးကားလေး မျှော်နေသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ ဒီကားကတော့ အရင်သုံးကားနဲ့ မတူ ဇာတ်လမ်းကွဲသွားတာပေါ့ pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 319MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သဲထိတ်ရင်ဖို, ဟာသ, အက်ရှင်
ဒီကားက အကယ်ဒမီ မှာရော Golden Globe မှာပါ Nomination အများဆုံးရထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး၊ မင်းသားကြီး Michael Keaton ရဲ့ တကျော့ပြန်လာတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် Review တွေဖတ်နေကျ ပရိတ်သတ်ကြီးက သတိထားမိမှာပါ။ ကျွန်တော် ဒီကားကလွဲရင် ဘယ်ဇာတ်ကားကိုမှ Rating 10 မပေးဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒီကားကတော့ တကယ့်ကို ပေးသင့်လို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ Interstellar တို့ Inception တို့လိုလည်း မရှုပ်ထွေးပါဘူး၊ The Sixth Sense လိုလည်း Twist တွေမပါပါဘူး။ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း မှာ မင်းသား Michael Keaton က တစ်ချိန်က Birdman ဆိုတဲ့ Superhero အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ကာ နာမည်ကြီးမင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နေရာတစ်နေရာ ရဖို့အတွက် သူရဲ့သရုပ်ဆောင် အရည်အသွေးကိုပြနိုင်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူက Broadway (New York က ပြဇာတ်ရုံတွေ ရှိတဲ့ လမ်း) ပြဇာတ်တစ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုက် သရုပ်ဆောင်၊ ကိုယ်တိုင် တင်ဆက်ပြီး သူရဲ့အနုပညာကို ချပြဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ရိုးရိုးလေးပေမယ့်၊ သူရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်ဒုက္ခတွေကို တင်ဆက်ထားတာဟာ တကယ့် ကို အနုပညာမြောက်ပြီး၊ သရုပ်ဆောင်လည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး မှာ ဇာတ်ဝင်ခန်း အကူးအပြောင်းက အစ သာမန်ရုပ်ရှင်တွေလို (Fade to black) အမှောင်ချပြီး နောက်တစ်ခန်း ကူးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ဇာတ်ကောင်တွေနောက်ကို လိုက်ပြီး ရိုက်ကူးထား သလို တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းကိုလည်း ဆက်ပြီးရိုက်ထားတာကြောင့် ထူးခြားတဲ့ ရသ တစ်မျိုးကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားပြီးသွားတဲ့အခါမှာ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ကျန်နေစေခဲ့မှာဖြစ်ပြီး၊ သို့လော သို့လောနဲ့ အတွေးတသသ ဖြစ်စေမယ့်ဇာတ်လမ်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုပြောချင်တာက မင်းသားရဲ့ အခန်းထဲက ဘုရားစင်းထုတော် ဖြစ်ပြီး၊ စစတွေ့ချင်းမှာ တစ်ခြားကားတွေထဲမှာလိုပဲ အလှဆင်ထားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်၊ သေချာကြည့်ကြည့်တော့မှ စိတ်ပုတီးနဲ့ သောက်တော်ရေခွက်လို့ ယူဆရတဲ့ ရေခွက် လေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာ အတွင်းခံနဲ့တိုင်နေတာကလည်း တရားထိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပြီး (ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မဟုတ်လို့) Birdman က ဗုဒ္ဓဘာသာလားလို့ လည်းထင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အထင်လွှဲမှာစိုးလို့ကြိုတင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ကောင်းသလို တင်ဆက်ပုံကလည်း ပညာသား ပါပါတယ်။ မင်းသားကြီး Michael Keaton က သရုပ်ဆောင်ကောင်းသလို၊ Edward Norton ကလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီး Superhero မင်းသားက လက်ရှိ ရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားသလို၊ သူ့နေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ Michael Keaton ကလည်း တစ်ချိန်က Batman (1989), Batman Returns (1992) တို့မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန် မှာ ရုန်းကန်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဇာတ်လမ်းက ပိုအသက်ဝင်သွားပြီး၊ Michael ကလည်း ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အပြင် Emma Stone (Amazing Spider-Man) ကလည်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ အားဖြည့်ထားပါသေးတယ်။
ဒီကားက အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ရုပ်ရှင် ကို တကယ် စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်အနုပညာကို မြတ်နိုးတဲ့သူတွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ကားဖြစ်ပြီး၊ ရုံမှာသွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
အပျင်းပြေကြည့်မယ့်သူတွေ၊ အက်ရှင်ကားတွေပဲ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ ဒီကားက ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်စရာဖြစ်နေမှာပါ။
(အညွှန်းကို ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက် Movie Review မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ဒီဇာတ်ကားက 2015 ခုနှစ်အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ.....
Best Picture , Best Original Screenplay , Best Director , Best Cinematography
IMDb(8/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (93%) ရရှိထားတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့
လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 276 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ဟိုးအရင်တုန်းကတည်းက မြေခွေး နဲ့ လူသား ပေါင်းဖက်မရခဲ့ပါဘူး
မြေခွေးနတ် တွေဟာ လူသားတွေထက်တောင် ပိုချောပါသေးတယ်...
ဒီဇတ်လမ်းလေးကတော့ မြို့စားကြီးတစ်ဦးဟာ တစ်ချိန်က မြေခွေးမလေး
တစ်ကောင်ကို ကယ်တင်ခဲ့လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ အခါ မြို့စားကြီးကို
ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ဖို့ သူမရဲ့ သမီးအချောအလှ ကိုးယောက် ထဲက တစ်ယောက်ကို
မြို့စားကြီးရဲ့ သားနဲ့ ပေးစားဖို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး ပြောပါတယ်...
ဖြစ်ချင်တော့ မြို့စားကြီးရဲ့ သားဟာလဲ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်
လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မရွေးတက်တော့ မြေခွေးနတ်သမီးမကြီးဟာ စွန်တစ်ခုကို
လေပေါ်ဝဲပြီး ရွေးခိုင်းတဲ့ အခါ သမီးတွေ တစ်ဦးစီက မသိပဲ လိုက်လုကြပြီး
နောက်ဆုံး အချောဆုံးသမီးဖြစ်သူ မြေခွေးဖြူမလေးက ရရှိသွားပါတော့တယ်..
ကျပ်မပြည့်တဲ့ လူသားကို ယူရတော့မယ်ဆိုတော့ မြေခွေးဖြူမလေးက ညင်းပေမယ့်
နောက်ဆုံး မိခင် စိတ်ကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ မင်းသားလေးကို ယူမယ့်
အချိန်မှာပဲ လူသားတွေကို သတ်ဖြတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ လင်းနို့မကောင်းဆိုးဝါး များက
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 314 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သိုင်း, သဲထိတ်ရင်ဖို, အက်ရှင်
တတိယမြောက် ကားလေးပါဘဲ Pirate of the Carribean တွေအတွက် pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 389 MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးမှာတော့ အလွမ်းအဆွေးလေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းမှာပေါ့ :D ကဲ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးနော်
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သရဲကား, သဲထိတ်ရင်ဖို, ဟာသ, အက်ရှင်
ဇာတ်လမ်းကတော့ ကမ္ဘာကျော် အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်ကြီး စတီဗင်ဟော့ကင်း ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိလေးပါ...
အခုဖက်ခေတ်မှာ ဒုတိယအိုင်းစတိုင်းလို့တောင် တင်စားထားပြီး Black Holes ကနေ
ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ Radiation တွေကိုလည်း Hawking Radiation လို့နာမည်ပေးထားပါသေးတယ်...
သူရခဲ့တဲ့ ဆုတွေက ၂၁ ဆုတောင်ရှိပါတယ်...
ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သူဟာသာမန်လူကောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး...
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ဆိုတဲ့ ရောဂါဆိုးကြီး နဲ့ယှဉ်တွဲပြီးတော့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ A Brief History Of Time ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို သူဘယ်လိုရေးခဲ့ရလဲ ?
သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဝှီးလ်ချဲ ပေါ်မှာပဲ အမြဲတမ်း ကန့်သတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် သူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေ
အတွေးတွေကတော့ ဟိုးကမ္ဘာ့အပြင်ဘက် စင်္ကြဝဠာ ပေါင်းများစွာထိအောင် ရောက်နေပါတယ်..
ဆရာဝန်တွေက ၂ နှစ်ပဲနေရမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ သူဟာ အခုဆို ၇၃ နှစ်တောင်ရှိနေပါပြီ ...
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အပြုံးတွေ ကြိုးစားမှုတွေကတော့ မှေးမှိန်မသွားသေးပါဘူး...
ကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းကို ပိုပြီးသဘောကျတာက မင်းသား Eddie Redmayne သရုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပြီး...
ရုပ်ရည် ကလည်းတူတဲ့အပြင်သရုပ်ဆောင်တာတွေပါ ပီပြင်လွန်းတာကြောင့်
၂၀၁၅ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာ တကယ့်ကိုထိုက်တန်ပါတယ်။
အော်စကာဆုပေးပွဲအပြီးမှာ Stephen Hawking က သူ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် Eddie Redmayne ကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်....
“The Theory of Everything” ဇာတ်ကားမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြီး အော်စကာဆုရသွားတဲ့ Eddie Redmayne ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ် Eddie, ငါမင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်” ဟု Stephen Hawking ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။
*** ဗဟုသုတ အနေနဲ့.... သူ့ရဲ့ ဝှီးချဲမှာ တပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအကြောင်းလေးပါဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tablet ==>> Lenovo ThinkPad X220 Tablet (2 copies)
Processor ==>> Intel® Core™ i7-2620M CPU @ 2.7GHz
SSD ==>> Intel® 150Gb Solid-State Drive 520 Series
Operation System ==>> Windows 7
Speech ==>> Speech Synthesizers (3 copies):
Manufacturer ==>> Speech Plus (Incorporated 1988, Mountain View, CA)
Model ==>> CallText 5010
IMDb Rating (7.8/10) Rotten Tomatoes (79%) ရရှိထားသလို အိုင်းစတိုင်းပြီးရင် ၂၀ ရာစုရဲ့
အထင်ရှားဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်အကြောင်းကို ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ... ။
(ဒီဇာတ်ကားကို Mĝ Ñŷêiň မှကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 312MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး
ကဲ ကပ္ပတိန်Jack Sparrow နံပါတ်၂ လာပါပြီဗျာ pCloud ကနေဘဲ ဖိုင်ဆိုဒ် 347MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
သဘာဝ နယ်လွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့
Pirate of the Carribean ဆိုတာ ကို ပြော လိုက်ရင်
ဇာတ်လိုက် ကျော်ကြီး ကပ္ပတိန်Jack Sparrow ( မင်းသား Johnny Depp) ကို
ချက်ချင်း မျက်စိထဲတန်းမြင်ကြ မှာပါ..။
၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၁၁ အထိ ရုပ်ရှင် ၄ ကားထွက်ခဲ့
ပြီး ကားတိုင်းလိုလို ၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ခဲ့သလို
ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ထာဝရ ရုပ်ရှင် အဖြစ်
နံပါတ် ( ၁၀ ) အတွင်းကရပ်တည် နိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....။
ဇာတ်လမ်းကတော့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုအောင် ကျော်ကြားလှတာမို့
အညွန်းမရေးပေးတော့ပါဘူး... pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 334MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
စမွေးဖွားလာကတည်းက ငါးစိမ်းတန်း ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ် အနံ့ဆိုးရွားတဲ့
ငါးဈေးတန်းမှာ အမှိုက်ပုံထဲ မွေးဖွားလာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ပါလာတဲ့ ပါရမီကတော့ အင်မတန် အနံ့ခံစွမ်းအားကောင်းတာရယ်
အနံ့တွေကို ခွဲခြားနိုင်ခြင်း ရှိမှုပါပဲ...
သူ့မှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းသိပ်မရှိပါဘူး လိုချင်တာကိုပဲ သိတဲ စိတ်ပဲရှိပါတယ်
သူ့ကို သနားလို့ အလုပ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ မွှေးနံ့သာများ ဖော်စပ်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆီ
ရောက်ရှိပြီး နောက် ကိုယ်ပိုင်ရေမွှေးတစ်ခု ထွင်ချင်လာပါတယ်...
ဒါပေမယ့် သူထွင်ချင်တာကတော့ အပျိုစစ်စစ်များ ရဲ့ ကိုယ်သင်းမွှေးရနံဖြစ်ပြီး
ထိုမွှေးရနံတွေ ရဖို့ မိန်းကလေးတွေကို ပေါင်းတင်အဆီထုတ်ပြီး ဖော်စပ်ရတာပါ
ဒီလိုနဲ့ မြို့တော်မှာ အပျိုလေးတွေ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အသတ်ခံရတာ များများလာလို့
လိုက်လံ ဖမ်းစီးပြီး ရေမွှေးဖော်စပ်တဲ့ ကောင်လေးကို ဖမ်းမိသွားတဲ့ အခါမှာတော့....
(18+ ဖြစ်လို့ မိသားစုနှင့်အတူမကြည့်သင့်ပါ)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 340MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Labels: ၁၈+ ရုပ်ရှင်, မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သဲထိတ်ရင်ဖို
မနေ့က Tai Chi Zero ရဲ့အဆက်ဖြစ်ပြီး IMDb Rating (6.2/10) ရရှိထားပါတယ်။ ကဲ သိုင်းကား ပရိတ်သတ်များ ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 241MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
အင်္ဂလိပ်စကားပြော တရုပ်သိုင်းကားပါ သိုင်းကားပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပေါ့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 228MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေကြပါစေ
Adult Movie ဖြစ်ပြီး Censored Version ဖြစ်တဲ့ ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဇာတ်လမ်းကတော့ စည်းကမ်းကြီးကြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းကို
လွတ်လပ်ပွင့်လင်း အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ ညှို့အားပြင်း ပြင်သစ်ဆရာမလေးရောက်လာပြီးတော့
ခပ်ဆိုးဆိုး တပည့်တွေနဲ့ ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲဆိုတာကို ဟာသဖောက်ထားတာပါ။
IMDb Rating(6.1/10) ရရှိထားပြီး အပျော်သက်သက်သာကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့
၁၈ နှစ်မပြည့်သူတွေ လုံးဝမကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
(မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ ညီလေး ကသာသားလေး ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 244MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေကြပါစေ
Labels: ၁၈+ ရုပ်ရှင်, မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, ဟာသ
My Lucky Star ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို မင်းသမီးကျန်းကျိယိ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပူးတွဲထုတ်လုပ် သူအဖြစ်ပါ တာဝန်ယူထားခြင်း ဖြစ်ကာအမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ဒန်နီးဂါဒန်က ရိုက်ကူး ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Adventure | Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
My Lucky Star ရုပ်ရှင်ကို MBS ရုပ်သံ၊ Sands Sky ပန်းခြံ၊ ပေကျင်းမြို့နှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ တံငါ ရွာများနှင့် မကာအိုရှိ တူးမြောင်း များတွင် သုံးသည့် ဦးကော့ပ်ကော့လှေများကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
ဇာတ်လမ်းမြူးမြူးကြိုက်သူတွေအတွက် လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 260MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မင်းသားကြီး Donnie Yen ပါဝင်ထားတဲ့ သိုင်းလောကသားတွေအကြိုက်
IMDb Rating (7.1/10) ရရှိထားတာကြောင့် လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါ။
(မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ Kyaw Swar Win မှကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်တာ
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 289MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီကားကတော့ 2006 ခုနှစ် တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ 300 ဇာတ်ကားရဲ့အဆက် အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Themistokles ဆိုတဲ့ အေသင် မြို့က စစ်သူကြီး က ပထမဆုံးအကြိမ် Persian တွေ စစ်ချီလာကတည်းက ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ဖူးသလို၊ Xerxes ရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့ (အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက စစ်ချီလာတဲ့ Persian ဘုရင်) Darius ကို ပါ မြှားနဲ့ပစ်ခွင်းပြီး သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက ဘုရင့်သားတော် Xerxes ကိုတော့ မသတ်ပဲ လွှတ်ပေးမိရာကနေ Xerxes က နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြီး စစ်ချီလာတာဖြစ်ပါတယ်။
300 မှာတုန်းက Sparta ကို Messenger လွှတ်ပြီး အညံ့ခံဖို့ပြောသလိုပဲ Athens မြို့ကိုလည်း အညံ့ခံဖို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Themistokles က Sparta ကို သွားပြီး King Leonidas ကို သူနဲ့ ပူပေါင်း ဖို့ပြောသလို၊ ဂရိအနေနဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် စုပေါင်းပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူသွားတဲ့အချိန်မှာ Leonidas က Oracle (ရှေးခေတ်က ပုဏ္ဏားကဲ့သို့ ရှေ့ဖြစ်ကို ကြိုပြောနိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုလုပ်မယ် ဆိုရင် သူတို့ကိုသွားပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါတယ်။) တွေနဲ့ သွားတွေ့နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ Themistokles နဲ့မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူက Athens က ရှိတဲ့ ရေတပ်အင်အားနဲ့ ရန်သူကိုခုခံရပါတယ်။
တစ်ဖက်က ချီတက်လာတဲ့ ရေတပ် Commander က ဂရိလူမျိုး အမျိုးသမီး Artemisia (Eva Green) ဖြစ်ပြီး သူမကလည်း ဂရိတွေကုန် စိတ်နာနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူငယ်စဉ်က ဂရိတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ စစ်ဖြစ်ရာမှာ အောင်ပွဲခံစစ်သားတွေက သူ့ မိသားစုကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ရုံသာမက သူမကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခံရသလို၊ ကျွန်ဘ၀မှာလည်း အနှိပ်စက်ခံ၊ မတရားပြုကျင့်ခံရပြီး၊ မသေရုံတမယ် ဖြစ်နေတော့မှ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို ပါရှန်းလူမျိုး General တစ်ဦးက ကယ်တင်ပေးပြီး ပညာစုံသင်ပေးသလို၊ သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇကြောင့် လည်း တိုက်ခိုက်ရေးထူးချွန်ပြီး Persian ဘုရင်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီစစ်ပွဲမှာ Greek တွေကိုမုန်းနေတဲ့ Artemisia ရယ်၊ Greek တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့လာတဲ့ Xerxes ရယ် ကို Greek တွေဘယ်လို တွန်းလှန်မလည်း၊ Greek ဆိုပြီး တစ်နိုင်ငံတည်းပေါင်းစည်း ပြီး တိုက်ခိုက် လာအောင် စည်းရုံးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 235MB နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားက တကယ့်အဖြစ်အပျက်ရာဇဝင်ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားပေမယ့် ရာဇဝင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ အသက်ကတော့ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် Graphic Effect တွေပင်။ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ တကယ်အသက်ဝင်ပြီး မာန်ပါလှပါတယ်။ Effect တွေကတော့ ဘယ်ဇာတ်ကားနဲ့မှ မတူအောင်တင်ဆက်ထားတာပါ။
***300 (သို့မဟုတ်) Battle of Thermopylae***
ဘီစီ ၄၈၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ပါရှားဘုရင် ဇပ်ဇီး(စ်) (Xerxes) သည် ဂရိပြည်အား တိုက်ခိုက် ရန်အတွက် စစ်သည် နှစ်သိန်း ၊ စစ်သဘောင်္တထောင်မျှ ပါဝင်သည့် ဧရာမ တပ် ကြီးနှင့် ချီ၍ လာသည်။ ထိုစဉ်က ဂရိတို့ သည် (City state ) မြို့ တမြို့တနိုင်ငံ စံနစ်ဖြင့်် သီးခြားစီ ရပ်တည်နေထိုင်လျက် ရှိကြသည်။ သို့ သော် တမျိုးနွယ်လုံး၏ ရန်သူ ပါရှန်တို့စစ် ချီလာပြီ ဆိုသည့် အခါ မြို့ နိုင်ငံ အများစုပေါင်း ၍ ခုခံရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။
ထိုအခါ ဂရိပြည် မြောက်ပိုင်းမှ တောင်ပိုင်းဆီ ထိုးဖောက်လာမည့် ပါရှန်စစ်ကြောင်းကြီး တခုကို စစ်ရေးစစ်ရာ အရ အချက်အချာကျသည့် သာမော်ပီလေး(Thermopylae) တောင်ကြားမှ ပိတ်ဆို့ ခုခံရန် တာဝန်သည် စပါတာ မြို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဘုရင်လီယွန်နီဒပ်(စ်) နှင့်သူ့ စစ်သည် တော်များထံ ကျ ရောက် လာသည်။
လီယွန်နီဒပ်(စ်) သည် လူခြောက်ထောင်ပါ တပ်တစ်တပ်ဖြင့်သာမော်ပီလေးမှ ခုခံရန် အသင့် ပြင်သည်။ သူ့ တပ်တွင် လူရင်း စပါတာများအပြင် အခြားမြို့ ပြ နိုင်ငံများမှ တပ်ဖွဲ့ အချို့ လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။
သာမော်ပီလေးသည် လေးမိုင်ခန့် ရှည်လျားပြီး ကျဉ်းမြောင်းသည့် နေရာများ၌ အကျယ်ပေ ငါးဆယ်မျှသာ ရှိသည့် တောင်ကြားလမ်း စစ်စစ် ဖြစ်သည်။ဘေးတဖက် တချက်စီတွင် အလွန်မြင့်မောက် မတ်စောက်သော တောင်နံရံကြီးများ ကာဆီးနေသည် ဖြစ်ရာ ရန်သူသည် ဒီတောင်ကြားမှ အပ အခြားဝင်စရာ လမ်းမရှိ။
ဝင်လာလျှင် လီယွန်နီဒပ်(စ်) ၏တပ်နှင့် ရင်ဆိုင် ရလိမ့်မည်။ သည်တပ်ကို အလုံးစုံချေမှုန်း နိုင် မှ သည်လမ်းက ဖြတ်သန်း၍ ရလိမ့်မည်။
သည်တွင် လီယွန်နီဒပ်(စ်)တို့စပါတာများအကြောင်း အနည်းငယ်ပြောချင်သည်။
စပါတာတို့ သည် ရဲ ဝံ့စွန့် စားမှုအတွက် အထူးလေ့ကျင့် ထားကြသူများဖြစ်သည်။ အလွန် စည်းကမ်းကြီးသည်။ ခြိုးခြံကျပ်တည်းစွာ စားသောက်နေထိုင်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကြံ့ ခိုင်မာကျောသည်။
စပါတာ တစ်ယောက် စစ်ထွက်ခါနီးတွင် သူကိုင်ဆောင်ရမည့်ဒိုင်းကြီးကို မိခင်ကိုယ်တိုင် က ယူဆောင်လာပေးလေ့ ရှိသည်။ ပြန်ရင် ဒီဒိုင်းကို ကိုင်ပြီး ပြန်ခဲ့ ။ မကိုင်နိုင်ရင်လည်း ဒိုင်းပေါ်က ပြန်လာခဲ့ ဟု မှာတတ်သည်။
စစ်ပွဲမှာ အနိုင်တိုက်ပြီး အသက်ရှင်လျက် အမေ့ထံ ပြန်ခဲ့ ပါ။ အကယ်၍ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးခဲ့ ရပြီ ဆိုလျှင်လည်း သူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ဒိုင်းပေါ်တင်ကာ အတူစစ်ထွက် သည့် ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ထမ်းပိုးပြီး ဂုဏ်သရေ ရှိစွာ ပြန်ရောက်လာတာ မြင်ချင်ပါသည်။
ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သည်စကားနောက်ကွယ်တွင် အဓိပ္ပါယ်တွေ ကိန်းအောင်းနေသေး သည်။ စစ်မြေမှာ ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့် အခါ သူရဲဘောကြောင်စွာ လက်လွတ်ထွက်ပြေး သည် ။သုံ့ ပန်းအဖြစ် အဖမ်းခံရပြီး ကျေးကျွန်ဘဝ ရောက်သွားသည် ။ စတာ မျိုးတွေ မကြားချင်ပါ ဟူသော သဘော။
မိခင်တွေပင် အဲသည်လို စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသည့် စပါတာ ။။
ထို့ ကြောင့် စပါတာ မှန်လျှင် ဓားဒါဏ်ရာ၊ လှံဒါဏ်ရာကို ကျောမှာ မပြချင်။
စပါတာတွေ လေ။ ကြည့်စမ်းပါ ။ သူတို့ ဒါဏ်ရာတွေ အားလုံး ရှေ့ ဘက်မှာတဲ့ ။
ကဗျာစာဆိုတွေက ဖွဲ့ ကြသည်။
အဲသည်တော့သာမော်ပီလေးမှာ ဆုံကြသည့်အခါ
လီယွန်နီဒပ်(စ်) နှင့်သူ့ စစ်သည်တွေ တောင်ကြားလမ်း တလျောက် ပိတ်ဆို့ ကာ တက် လာသမျှ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ခုခံကြသည်။ ပါရှန်တို့ မှာ လူအင်အားအဆမတန် များသော် လည်း တိုက်ရည်ခိုက်ရည်တွင် စပါတာကို လုံးဝ မယှဉ်နိုင်။ နှစ်ရက်လုံးလုံး အကျအဆုံး များ စွာခံကာ အတင်းဝင်တိုက်သော်လည်း ဂရိတပ်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်။
တတိယနေ့ တွင်မူ လျှို့ ဝှက်သည့် တောင်ကျော်လမ်းသေးလမ်းမြောင် တခုကို ဂရိသစ္စာ ဖောက်တဦးက ပြသဖြင့် ရန်သူတို့ ဂရိတပ်၏ နောက်ကျောဘက် သို့ ရောက်လာကြသည်။
ကြီးမားသော အင်အားဖြင့် ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ် အတိုက်ခံ ရတော့မည် ဆိုတာ မြင်သည့် အခါ လီယွန်နီဒပ်(စ်) က တပ်ဗိုလ်များကို ဆင့်ခေါ်သည်။ တိုက်ပွဲ ကအနေအထားပြောင်းသွားပြီ၊ သည်နေရာမှာ ဆက်တိုက်လျှင် မိမိတို့ အားလုံး ချေမှုန်း ခံရလိမ့်မည်။
ထို့ ကြောင့် ကျန်သည့် တပ်ဖွဲ့ တွေ အားလုံး အချိန်မှီ ဆုတ်ခွာကြပါ ။ မိမိနှင့်စပါတာစစ်သည် သုံးရာ ကတော့တာဝန်အရ သည်နေရာတွင် အသက်ပေးခုခံ ကျန်ရစ်မည်ဟု ကြေညာသည်။ သည်တွင် အခြားမြို့ ပြနိုင်ငံတို့ မှ စစ်သည်အများအပြား ထွက်ခွာသွားကြပြီး သပ်စပီယေ မြို့သား ခုနှစ်ရာနှင့်သီးဗ် (စ်) မြို့ သားလေးရာတို့ သာ စပါတာများနှင့် အတူကျန်ရစ်သည်။
ပါရှန်တို့ က ရှေ့ ဖက်မှ တပ်မကြီးတတပ် နောက်ဖက်မှတောင်ကိုကျော်၍ တပ်မကြီး တတပ် ညှပ်ပိတ်တိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်လာသည့်အချိန် လီယွန်နီဒပ်(စ်) က သူ့ တပ်ကို စစ်မျက်နှာ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ၍ တိုက်နိုင်မည့် နေရာသို့ ရွေ့ယူသည်။ ထို့ နောက်တွင် ရန်သူ ချီတက်လာသည် အထိ မစောင့် ။ မိမိတို့ က အရင် ဦးအောင်ဝင်တိုက်သည်။ စပါတာတို့တိုက်ခိုက်ပုံက သည်ပွဲတွင် ပါရှန်ရန်သူကို အပြီးသတ် ချေမှုန်းရန် သံန္နိဌာန် ချထားကြ သည့် အလားပင် ။
ရဲစွမ်းသတ္တိသက်သက်နဲ့ သာ ဆုံးဖြတ်မည် ဆိုက ဒီပွဲသည် ပါရှန်တွေ မရှုမလှ အရေးနိမ့် သည့် ပွဲ ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
သို့ သော် အရေအတွက်ခြင်းက အဆမတန် ကွာခြားလွန်းလှသည်။ စစ်မြေတခွင်လုံးမှာ ပါရှန်တွေ တင်းကြမ်းပြည့်နေသည်။
ဓားသံလှံသံ ကြွေးကြော် အော်ဟစ်သံတွေ သောသောညံနေသည့်ကြားမှာ လီယွန်နီဒပ်(စ်) ကျဆုံးသည်။ ချက်ချင်းပင် စပါတာတွေ သူ တို့ ခေါင်းဆောင်နဘေးမှာ ဝိုင်းရံလိုက်ကြပြီး အပြင်းအထန် ခုခံကာကွယ်ကာ အနီးရှိ တောင်ပူစာ တခုဆီသို့အလောင်းကို သယ်ကြ သည်။ သည်နေရာတွင် နောက်တကြိမ် အဝိုင်းခံရသည်။ စပါတာအားလုံး သူတို့ ခေါင်း ဆောင်နည်းတူ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားကြသည်။ သက်(စ်)ပီယေ သားများ လည်း စပါတာတို့ နှင့် အတူ ကျဆုံးခဲ့သည်။ သီးဗ်(စ်) မြို့ သားတချို့ သာ လက်နက်ချ အညံ့ ခံခဲ့ ကြသည်။
ဂရိနှင့်ပါရှန်တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဆင်နွဲကြပြီး နောက်ဆုံး၌ ပါရှန်တို့အရေးနိမ့် ကာ ဂရိမြေမှ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြရသည်။
စစ်ကြီးအပြီးတွင် တောင်ပိုင်းသား စပါတာတွေ သာမော်ပီလေးသို့လာရောက်ကာ ကျဆုံးခဲ့ သော စစ်သည်များအတွက် ထိုနေရာ၌ ကျောက်စာတိုင်တတိုင် စိုက်ထူထားသည်။ ကျောက်စာတိုင်၌
"Go tell the spartans , thou that passeth by , That here obedient to their laws , we lie."
"အဆွေ ခရီးသွား အမှာစကား ပါးပါ ရစေ။ စပါတာ၏ အမိန့် ဥပဒေများကို စောင့်ထိန်းလိုက် နာကာ ကျွနုပ်တို့ဤနေရာ၌ လဲလျောင်းခဲ့ကြပြီဖြစ်ကြောင်း စပါတာတို့ အား ပြောကြား ပေးပါလေ။"
ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ် ရသည့် ကမ္ပည်း စာတခု ရေးထိုးထားသည်။
ကျောက်စာတိုင်ကား တရံရောအခါ က ဂရိအမျိုးသား တရပ်လုံးအတွက် မိမိတို့ အသက်ကို ပေးလှူသွားခဲ့သည့် စပါတာ မြို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင် (ဘုရင်) လီယွန်နီဒပ်(စ်) (Leonidas) နှင့် နောက်ပါစစ်သည် သုံးရာတို့ ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံသည့် စိတ် ဓာတ်ကို ထာဝရမော်ကွန်းတင်ရန် အလို့ ငှာ စိုက်ထူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောက်တိုင်ပါ ကမ္ပည်းစာကို ဖတ်ရှုပွားများကာ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ဂျွန်ရပ်စကင်း က လူသားတို့ နှုတ်မှ မြွက်ဟဘူးသမျှ အထဲတွင် ဂုဏ်ကျက်သရေ အရှိဆုံး စကားလုံးစုပေတည်း ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
Battle of Thermopylae ကား စပါတာ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ပြသော အမှတ်သင်္ကေတ ဖြစ်သကဲ့ သို့ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခြင်း ဟူသည်ကို ထင်ရှားအောင်ပြခဲ့သည့် ဥပမာ သာဓက တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
(ရာဇဝင်ကို ဆရာဖေမြင့် ၏ အားပြင်းတဲ့မြှားတစင်း မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြသည်။)
pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 272MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ကဲ လူသိများတာကတော့ အာနိုးနဲ့ ရမ်ဘိုပေါ့ဗျာ :D ဒီကားကို တင်ဖူးတာတော့ ကြာပြီ လင့်ပျက်သွားပြီးလား ဘာလားတော့ မသိဘူး အရင်က ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးဘဲ တင်ထားတာ ခု ဖိုင်ဆိုဒ်ချပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားလေးပါ ပြန်ကြည့်နေတာလဲ အခါပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး ကဲ pCloud ကနေ ဖိုင်ဆိုဒ် 267MB နဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
The Lord of the Rings;The Return of the King (2003)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) နဲ့ The Lord Of The Rings;The Two Towers(2002) ကို အရင်နေ့တွေက တင်ပြိးသွားပါပြီ ခု ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး လာပါပြီဗျာ ကျွန်တော်တော့ Hobbit 1,2,3 ကြည့်ပြီးမှ ဒီကားကို ပြန်ကြည့်တယ်ဗျာ ကဲ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ကြပါဦး
အထွေအထူး မိတ်ဆက်စရာ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနေ့က The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) ကို ကြည့်ပြီးသွားရင် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို သိနေမှာပေါ့ ဒီနေ့တော့ The Lord Of The Rings;The Two Towers (2002) မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါဦး ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို အရေအသေးအများကြီးမကျအောင် ချပေးလိုက်ပါတယ် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါဦး
ဒီကားကတော့ တစ်ချိန်မှာ လူကြိုက်များ နာမည်ကြီးလာမယ့် The Lord of the Ring Trilogy ရဲ့ အစ၊ Middle Earth ကို ရုပ်ရှင် ကြည့်ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုထဲက ကောင်းပြီးသား ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြပါဘူး။ Harry Potter လိုကားတောင်မှ တကယ့် စာအုပ်ကို အားပေးတဲ့ပရ်ိတ်သတ်တွေ သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် The Lord of the Rings ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမား တွေ ပါ ချီးကြူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်း ပြောပြရာမှာ အသေးစိတ်ပြောဖို့ မလွယ်သလို၊ အသေးစိတ်ပြောရင် ဇာတ်လမ်း ရဲ့အဓိကအချက်တွေ ပါကုန်မှာဖြစ်လို့၊ အနည်းငယ်ပဲ တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကအကြောင်းအရာက ဇာတ်လမ်းမှာ သိကိုသိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး Spoiler မပါအောင်ရေးထားပေးပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ The Dark Lord, Sauron ရဲ့ Spirit က တစ်ဖန်ပြန် လည်နိုးထလာပြီး၊ သူရဲ့ လက်စွပ်ကို ပြန်ရှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ Bilbo Baggins ကလည်း တစ်ချိန်တုန်းက သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပျောက်လက်စွပ်ကို သူရဲ့ တူဖြစ်တဲ့ Frodo ကို အမွေပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို Gandalf က သတိထားမိသွားပါတယ် ဒီလက်စွပ်ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက Middle Earth ရဲ့ ရန်သူ Orc တွေရဲ့ခေါင်းဆောင် Sauron ရဲ့ လက်စွပ်ဖြစ်မှန်းသိသွားခဲ့ပြီး Sauron က သူ့ရဲ့ တပည့်တွေကို စေလွှတ်ပြီး လိုက်ရှာနေတာကြောင့် Frodo ကို သူတို့ရဲ့မြို့ကနေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာပြီး Bree ကို အရောက်သွားဖို့ စေလွှတ်လိုက်ပြီး၊ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ Saruman ကိုသွားပြီး တိုင်ပင်ဖို့ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ Frodo နဲ့ သူ့ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့ Sam, Marry, Pippin တို့က Bree မရောက်ခင်မှာ Sauron ရဲ့ တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ Nazgul (Undead Human Kings) တွေလက်က လက်မလေးတင် လွတ်ခဲ့ပြီး၊ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာမယ့် Aragorn နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး၊ Nazgul တွေလက်က လွတ်အောင်ပြေးရင်းနဲ့ Rivendell ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလက်စွပ်က သူ့ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းရှိသလို Sauron ကိုပဲ သစ္စာရှိပြီး၊ Sauron ထံပြန်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Frodo ကတော့ ဒီလက်စွပ်ကို စိတ်ဝင်စားမှုမပြသလို၊ သူ့အပေါ်ကို သိပ်ပြီး သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်၊ လက်စွပ်ကို Frodo ကိုပဲ ပေးထားပြီး၊ ဖျက်ဆီးဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလက်စွပ်ကို ဘယ်လက်နှက်နဲ့ မှဖျက်စီးလို့ မရပါပဲ လက်စွပ်ကို ပန်းထိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Mount Doom လို့ခေါ်တဲ့မီးတောင်ထဲကို
ပစ်ချမှပဲ ဖျက်ဆီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သွားရာမှာ Frodo ကိုလမ်းပြဖို့ Gandalf က တာဝန်ယူသလို၊ မင်သား Aragornရယ် Legolas (Elf), Gimli (Dwarf) နဲ့ Boromir (Human) တို့က လိုက်ပါစောင့်လျှောက်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Frodo ရဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကလည်း လိုက်ပါမှာဖြစ်တာကြောင့်9members of the Fellowship of The Ring ဆိုပြီး တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေစလို့ သူတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်စတင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ Action/Adventure ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားက လူကြီးလူငယ်မရွေးကြည့်နိုင်ပြီး၊ မိသားစုတူတူကြည့်ဖို့လည်းအစဉ်ပြေပါတယ်။ No Sex, No Nudity ဖြစ်ပြီး၊ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်သလို၊ ကြည့်ပြီးသားကိုပြန်ကြည့်ရင်တောင် မရိုးရအောင် ကောင်းတဲ့ကားဖြစ်ပြီး၊ မကြည့်ဖူးသေးဖူးဆိုရင်
အခုပဲဒေါင်းပြီးကြည့်ကြ ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Hobbit 1,2,3 ကြည့်ပြီးမှ ဒီကား ပြန်ကြည့်တာ ပိုပြည့်စုံသွားသလိုပါဘဲ